Doorashada Puntland: "Rag baa ka taliyay, Rabbina waa aqbalay" - Maqaal - Horseed Media
Doorashada Puntland: “Rag baa ka taliyay, Rabbina waa aqbalay” – Maqaal December 29, 2013 Share this:FacebookTwitterGoogle
e) Noogu doorta Xubnaha Barlamaanka sidii noo horseedi karta Horumar Halku dhiguna waa inuu noqdo Rag baa ka taliyay, Rabbina waa aqbalay. Markaan tan leeyahay yaan loo fahmin in dumarku ka maqan yahay waayo Nin Hooyo dhashay Talo maseego , Nin aan xaas wanaagsan ka danbayna Nin ma noqodo. Nin aan Gabar fiican la dhalana Garab ma helo. Marka doorka haweenkana intii ilaahay u baneeyey yaan laga hagran. f) Dhul udug bulushada ku dhaqan waa kuwo qadariya Hogaan dhaqameedkooda marka tusahu haduu wax khaldo yaa wax inoo saxaya. Oo marjac ah. Waa cidna !————
- waa inay abuuraan uruuro si mutuduwacnimo ah u shaqeeya kana kooban bulushada rayidka ah.
- waana inay bixiyaan canshuuraha waayo waa kuwa u fududaynaya in dib u dhis lagu sameeyo kaabayaasha dhaqaalaha.
- waa inay qabyaalada ka fogaadaan iyo u durbaan tunka aan dantu ugu jirin ee aakhiro seega ah .
- bulushada Rayidka waa inay marxalada qaarkood si askarinimo ah u shaqeeyaan Dal dadkiisaa difaaca, wana inaad ogaataan guushu gacmihiinay ku jirtaa ee kasbada madaxdiina .
Mimi says	December 29, 2013 at 10:21	Mahadsanid wlaal waa maqaal muhim ah,laakiin yaa ku dhaqmaaya.
Madaxweynaha Puntland Maalintii Labaad ku sugan Ethiopia.14 arday oo noqday ardaydii ugu horaysay oo dhameeya Dugsiga sare ee Kala-bayr. (Sawirro)Wasiiro kormeer ku sameeyey Xabsiga Magaalada Muqdisho (Sawiro)Qaarka mida xildhibaanada DF oo ku sugnaa PL oo maanta ka dhoofay Gaalkacyo (Dhageyso)